सर्वश्रेष्ठ मनोरञ्जन पार्क युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सर्वश्रेष्ठ मनोरञ्जन पार्क युरोप मा
तपाईं जो निश्चित हुनुहुन्न भने युरोप मा मनोरञ्जन पार्क सबै भन्दा राम्रो हो, त्यसपछि कुनै थप हेर्न. यस लेखमा सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन पार्क केही सूची तपाईं अहिले युरोप मा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ छ! हामी तपाईंलाई प्रत्येक विस्तृत वर्णन दिन र तपाईंले रेल द्वारा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी. त्यसैले गरेको सूची सुरु गरौँ!
सबैभन्दा ठूलो मनोरञ्जन पार्क युरोप मा - डिज्नील्याण्ड पेरिस
यदि तपाईंले भ्रमण गर्नुभएको छैन, तपाईं पक्कै सुनेका छौं पेरिस डिज्नील्याण्ड. पार्क एक मूल डिज्नील्याण्ड मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर सबै समावेश. प्लस, यो दुई विषय पार्क र-साइट सात होटल को कुल समावेश! तपाईं सबै कुरा भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्भवत तपाईँले धेरै दिन आवश्यक हुनेछ. यसबाहेक, तपाईं पनि सही पार्क गर्न अर्को छ कि वल्ट डिज्नी स्टूडियो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ.
जब यो पार्क पुग्नु गर्न आउँछ, यो रेल द्वारा त्यहाँ पुग्नु गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ. फ्रान्स सबैभन्दा केन्द्रिय रेल हब को एक सही डिज्नील्याण्ड अर्को छ. प्रश्न केन्द्र Marne-ला-भ्याली / Chessy रेल स्टेशन हो, र तपाईं सजिलै पुग्न सक्छ फ्रान्स कहीं वा बाहिर. अरु के छ त, डिज्नील्याण्ड पनि टाढा बाट स्थित छ पेरिस.
पेरिस डिज्नील्याण्ड Marne-ला-भ्याली गाडिहरु गर्न
डिज्नील्याण्ड Marne-ला-भ्याली गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
लियोन डिज्नील्याण्ड Marne-ला-भ्याली गाडिहरु गर्न
लिले डिज्नील्याण्ड Marne-ला-भ्याली गाडिहरु गर्न
सबैभन्दा लोकप्रिय मनोरञ्जन पार्क जर्मनी - Europapark
Europapark युरोप को सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा लोकप्रिय पार्क छ, दाँया पछि डिज्नील्याण्ड. तथापि, कि हामी यसलाई रोजे किन छैन. यो सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन किनभने रोलर-कोस्टरस हाम्रो विचारमा युरोप मा पार्क को एक हो. तपाईं यि धेरै संख्यामा सवारी गर्न सक्नुहुनेछ र वास्तवमै अनौंठो धेरै. तपाईं आर्थर जाँच गर्नुपर्छ – साथै एक गाढा सवारी एउटा इन्डोर / आउटडोर एक संयोजन भन्ने नयाँ रोलर-कोस्टर!
तपाईं यो पाउन सक्नुहुन्छ जंगमा अद्भुत थिम पार्क, Freiburg एउटा शहर नजिक र स्ट्रासबर्ग. त्यो तपाईं रेल द्वारा एकदम सजिलै Europapark पुग्न सक्दैन भन्ने हो, कुनै पनि शहर बाट. को रेल स्टेशन तपाईं त प्रवेश गर्न हिंड्न सक्छौं त्यसैले केही 4km टाढा छ, वा नियमित को एक ले बसें कि पार्क जाने.
स्ट्रासबर्ग Ringsheim गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट Ringsheim गाडिहरु गर्न
बेसल Ringsheim गाडिहरु गर्न
OFFENBURG Ringsheim गाडिहरु गर्न
युरोप को कहानी पूंजी - Efteling मनोरञ्जन पार्क
युरोप भरि सबै धेरै मानिसहरू सबै लागि यो DREAMLAND बारेमा थाहा छैन कहानी प्रेमीहरूको! तथापि, पार्क को बेनेलक्स सबै तीन देशहरूमा भन्दा ठूलो छ. अरु के छ त, efteling सबै चिरपरिचित दन्तिये जीवनमा आएको ठाउँमा छ! हंस मसीही एन्डरसन को क्लासिक fairytales धेरै, चार्ल्स Perrault, र भाइहरूलाई Grimm यहाँ जीवनमा आएको. तिनीहरूले सवारी को एक विस्तृत विविधता मार्फत चित्रित गर्दै छन्, साहसिक, र अधिक. समग्रमा, तपाईं कम से कम दुई दिन सबै भ्रमण गर्न आवश्यक छ!
तपाईं एकदम Efteling भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै रेल मार्फत. यसलाई सही नेदरल्यान्ड मा सबै प्रमुख शहर बीच मा स्थित गर्नुपर्छ. त्यो पार्क बनाउँछ पहुँच को भन्दा सबै नेदरल्यान्ड्स र बाहिर. सही रेल जडानहरू संग, तपाईं युरोप मा जहाँबाट पार्क पुग्न सक्दैन. अर्को कारण हो Efteling युरोप मा सबै भन्दा राम्रो मनोरञ्जन पार्क बीचमा किन छ!
टिलबर्ग गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प टिलबर्ग गाडिहरु गर्न
बर्लिन टिलबर्ग गाडिहरु गर्न
पेरिस टिलबर्ग गाडिहरु गर्न
समग्रमा, यी तीन हाम्रो शीर्ष रुचि हो. त्यहाँ युरोप मा धेरै अरूलाई हो, केहि निश्चित छ, तर हामी मात्र यी तीन साँच्चै राम्रो हो भन्ने महसुस. तिमी सक्छौ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तपाईंले तिनीहरूलाई गर्न पार्क र रेल सवारी बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने. पनि, मा एक नजर स्वतन्त्र महसुस हाम्रो ब्लग. हामी सामान्यतया भ्रमण धेरै ठाउँ र रेल सवारी लायक लेख्दै र युरोप भर सबै लिइरहेका छन्!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#मनोरञ्जन पार्क #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip ट्रेन यात्रा सल्लाह यात्रा